तिहार सबैको शुभ रहोस् ! | चितवन पोष्ट
तिहार सबैको शुभ रहोस् !
हिन्दु नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहार अर्थात् शुभदीपावली हाम्रो घरआँगनमा प्रवेश गरिसकेको छ । तिहारलाई यमपञ्चक पनि भनिन्छ । हिजो तिहारको पहिलो दिन अर्थात् काग तिहार, आज दोस्रो दिन कुकुर तिहार, तेस्रो दिन लक्ष्मीपूजा, चौँथो दिन गोवद्र्धनपूजा र पाँचौँ दिनमा भाइटीका । घरघरमा दीपावली र झिलिमिली बत्ती बालेर भव्यरुपमा मनाइने भएकाले यस पर्वलाई विशेषगरी दीपको चाड पनि भनिन्छ । यमपञ्चकको सुरूको दिन खबर बोक्ने कागलाई पूजा गरिन्छ भने दोस्रो दिन घरको सुरक्षा गर्ने कुकुरलाई । तेस्रो दिन पोसिला दूधजन्य परिकार दिने गाईको पूजा गरिन्छ भने चौँथो दिन खेतबारी जोतेर अन्न फलाउन मद्दत गर्ने गोरूको पूजा गरिन्छ । पाँचौँ दिन विशेष दिनका रुपमा रहने गर्छ, जुन दिन दिदीबहिनीहरुबाट भाइटीका लगाइने गरिन्छ । हाम्रा चाडपर्वहरु आफैँमा सांस्कृतिक र सामाजिक विशेषतायुक्त छन् । हामीले आफ्नोमात्र सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना नगरेर विश्वशान्ति र समृद्धि तथा ‘सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया’ भन्ने नीतिशास्त्रसमेतको स्मरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
लक्ष्मीको पूजाआराधना गर्दैमा समृद्धिको कामना पूरा हुन्छ नै भन्ने त होइन । तथापि, दाजुभाइ र दिदीबहिनीबीचको सुसम्बन्धलाई अझ बढी सुदृढ र सुमधुर बनाउने एक पवित्र चाडका रुपमा यो पर्वलाई लिइएको छ । यसका साथै परम्परागतरुपमा खेलिँदै आएको देउसीभैलोले नेपालीको छुट्टै पहिचान समाजमा स्थापित गराउन सफल भएको छ । यस पवित्र चाडलाई पछिल्लो समय विकृत बनाइएको भनेर आलोचना पनि हुन थालेको छ । चाडपर्वहरु भनेका समाजका अमूल्य निधि हुन् । यिनको निरन्तरता, विकास र सुधार आमसमुदायकै दायित्व हुन आउँछ । चाडपर्वहरुको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु पनि हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । तिहारमा देशविदेशमा रहेका दाजुभाइ र दिदीबहिनीबीच भेटघाट हुने, साथीसंगीबीच दुःखसुख विनिमय गर्ने, समाजमा भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गर्ने, एकापसमा रमाइलो गरेर देउसीभैलो खेल्नेजस्ता मह¤वपूर्ण अवसर प्राप्त हुन्छ । एक वर्षसम्म आआफ्ना दैनिकीमा व्यस्त भए पनि चाडपर्वमा सँगै मिलेर मनाउने अवसर जुरेको हुन्छ । तर, यति धेरै सांस्कृतिक–सामाजिक मूल्य र मह¤व बोकेका चाडपर्वलाई विकृत हुन नदिनु, अराजक हुन नदिनु पनि हाम्रै दायित्वभित्र पर्छ ।
पछिल्लो समय यमपञ्चक लाग्नेबित्तिकै गाउँसहरमा जुवातास खेल्ने परम्परा विद्यमान छ । जुवातासमा हजारौँ, लाखौँ रूपैयाँको खेलबाड हुने कारण त्यसले परिवार, आफन्त, छरछिमेकबीच झैझगडा र तनावको स्थिति पैदा हुन्छ । तिहार भन्नेबित्तिकै ‘जुवातासको चाड’ भनेर बुझ्ने जमातको पनि कमी छैन । तिहारमा पटाकाजन्य पदार्थको प्रयोगले दुर्घटना पनि निम्त्याइरहेको हुन्छ । खुसीयालीमा चाड मनाउँदै गर्दा त्यसले उत्पन्न गर्ने परिणामचाहिँ दुःखद हुनुहुँदैन । केही वर्षयता सरकारले पटाकाजन्य पदार्थको आयात÷निर्यात र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, छिटपुटमा भित्रिने क्रम जारी नै छ । चाडपर्वका नाममा गरिने नकारात्मक प्रवृत्तिलाई क्रमशः हटाउँदै यसको अमूल्य सांस्कृतिक–सामाजिक क्रियाकलापलाई अनुसरण गर्दै जानुपर्छ । यसवर्ष पनि आपसी सद्भाव साटासाट गर्दै देउसीभैलो खेलेर रमाइलो वातावरणमा मित्रतालाई प्रगाढ बनाऔँ । जाँडरक्सी खाएर अरुलाई अवरोध गर्ने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, जुवातासको कुलतमा लाग्ने र पटाका पड्काउनेजस्ता नकारात्मक कुराहरु हटाउन महालक्ष्मीले सबैलाई सद्बुद्धि प्रदान गरुन् । तिहार सबैको शुभ रहोस्, समस्त हिन्दुहरुमा तिहार अर्थात् शुभदीपावलीको हार्दिक शुभकामना !
चेलीबेटी सुरक्षाको सवाल